WARSHADEYNTA BEERAHA WARSHADAHA: WAX SOO SAARKA, DHISMAHA IYO KULULAYNTA XARUMAHA XIRFADAHA QABOOBAHA, LAGU KORIYO FILIM, IYO SIDOO KALE MASHAARIICDA, SAWIRADA IYO QALABKA DAABACAADDA - DHISMAYAASHA
Soo saarida iyo dhismaha warshadaha warshadaha: Mashaariicda, sawirada iyo sawirrada
Sanadka oo dhan aqalka dhirta warshadaha waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku beerato khudaarta iyo miraha beeraha sannadkiiba.
Waxaa ka shaqeeya agagaaraha beeraha, beeraha, mulkiilayaasha beeraha waaweyn ee gaarka loo leeyahay.
Warshadeynta warshadaha casriga ah: muuqaalada
Isgoysyada warshadaha waxay ku kala duwan yihiin qiyaasta caadiga ah ee caadiga ah, waxay isticmaalaan nidaamyada kuleylinta, taas oo u ogolaanaysa inay hesho dhowr waxsoosaar sannadkiiba. Dhismayaasha aqalka dhirta lagu koriyo waxay leeyihiin meel muhiim ah iyo, sida caadiga ah, waxay leeyihiin dherer weyn.
Qaababka noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo badan. Xaaladaha Waqooyiga fog Dhismayaasha aqalka dhirta lagu dhejiyo waxaa la dhisay derbi ah dhismo dhisma oo isticmaalaya iftiinka macmal.
Large, oo aad u qalabeysan leh nidaamka raadinta elektarooniga ah iyo tiknoolajiyada, dhismayaasha aqalka dhirta lagu dhisi karo Holland.
Meelaha faa'iidada leh ee qaababka noocaas ah waa dhowr kun mitir oo laba jibbaaran.
Tani waa dhab dhirta daboolan.
Khudaarta, miraha iyo ubaxa waa la koray halkan ma aha oo kaliya ciidda, laakiin hababka hidroponics.
Markaas dhirta waxaa lagu beeray maaddo qurub oo qurux badan oo la mid ah dhogor dhalada.
Waxyaabahan waxaa la siiyaa macdan iyo biyo, oo si gooni ah loo doorto dhaqan kasta. Tiknoolajiyadaani waxay u oggolaaneysaa wax-soosaarkooda aad u sareeya
Waayo qolalka aqalka dhirta lagu dhejiyo Qalab gaar ah ayaa loo soo saaraa kuleylinta, waraabka, waraabka, bacriminta.
In dhismayaasha sida u sameeyo kuleylka kulaylka badan iyo dabaqa kulul, nidaamka kulaylku wuxuu bixiyaa wax soo saarka iyo bixinta dhismaha carbon dioxidetaas oo loo baahan yahay hababka dheef-shiid kiimikaad ee dhirta maalintii. Guryaha Dutch-ga ah waxaa lagu keenaa macaamiisha adduunka.
Shirkadaha Ruushka tiknoolajiyada tiknoolajiyadda wax soo saarka galbeed ee lagu koriyo warshadaha
Waxyaabaha Ruushku qiimeeyaan beeralayda iyo macaamiisha shakhsi ahaanba jaban oo laga dhoofiyo, sidoo kale, shirkadaha maxaliga ah ee ku hawlan soo saarida beeraha beeraha, waxay ka dhigaan kuwo ku habboon xaaladaha cimilada ee gobollada.
Mugga weyn beeraha warshadaha waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku koraan dhirta ku yaal dalladaha, iyagoo sariirta ku xiran, iyagoo isticmaalaya dhowr dabaq. Tirada "dabaqyada" waxay ku xiran tahay dhererka dhirta. Guryaha aqalka dhirta lagu sameeyo iftiin macmal ah, taas oo u ogolaanaysa dhirta inay helaan iftiin badan xagaaga gu'ga iyo dayrta goor dambe, iyo sidoo kale xilliga jiilaalka.
WARBIXIN: Guryaha warshadaha waxay leeyihiin meel ballaadhan, mug weyn, noocyo kala duwan oo kuleyl iyo iftiin.
Warshadaha warshadaha - sawir:
Moodooyinka la soo saaro
Shirkadaha waaweyn ee gobollada oo idil Ruushka in la sameeyo mashaariic heerar ah oo loogu talagalay beeraha caadiga ah iyo warshadaha. Waxay abuurayeen mashaariic taxadar ah oo ay u soo bandhigaan iibsadaha doorasho ballaadhan.
WARBIXIN: marka la naqshadaynayo lagu koriyo warshadaha SNiP 2.10.04-85
Waa maxay warshadaha warshadaha? Waxaa jira dhowr noocyada garoonnada xirfadlayaasha ah beeralayda:
faro badan oo leh gallery;
Beeralayda iyo beeralayda ayaa ku raaxeysanaya sumcadda ugu weyn ee beeralayda iyo milkiilayaasha guryaha gaarka loo leeyahay. Guryo lagu dhiso tunnel. Taxanaha waxaa soo saarey warshado ku saleysan xeerarka dhismaha ee hadda jira iyo xeerarka Ruushka.
Isgoysyada warshadaha ee qiyaasta ah waxaa lagu soo saaraa filimka iyo hoosta polycarbonate, naqshadeynta waxay isticmaashaa noocyo kala duwan. Qeybta lagu koriyo waxaa lagu dari karaa "Gothic", "leh miro qumman" iyo "derbiyada toosan ayaa lagu xoojiyay." Baaxadda dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo waxay ka bilaabantaa 3.5-12 mitir.
Guryo-warshadeed "Farmaajo" oo loo qaabeeyay ixtiraam SNiP 2.10.04-85, waxaa loogu talagalay beerista warshadaha ee khudradda, berry iyo geedo. Qaab-dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo waxaa laga soo uruuriyaa khariidad lagu dhejiyay.
Dhuxulada caleenta ah waxaa lagu soo jiidayaa jilbaha toosan. Qaybta dhismooyinka aqalka dhirta lagu koriyo waa qeybo yar yar (dillaac) ama loo yaqaan ("Gothic").
Tirada beeraha warshadaha "Farmer":
Heerka moodooyinka kala duwan ee taxanaha waa 3-4 mitir. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad koraan dalagyada dheeraadka ah iyo dhirta yaryar, oo ay ku jiraan geedo ku yaalla dushooda.
Guryaha taxanahan ayaa lagu rakibay saldhig kasta ama dhulka, taas oo ay ku taallo xarumaha. Baaxadda dhismaha ayaa ka yimid 3.5 ilaa 7.7 mitir. Baakadda aasaasiga ah waxaa ka mid ah albaabbo laba lage ah, kuwaas oo lagu rakibay dhismaha dhirta aqalka dhirta lagu koriyo. Marka la dalbado iibsadaha, hawada hawada ayaa lagu dari karaa.
Guryaha lagu daboolo polycarbonate gacanta oo hufan. Macaamiisha ayaa dooran kara dhumucda polycarbonate - 6 mm (lagu taliyey), 8 mm ama 10 mm. Polycarbonate waxaa lagu dhejiyay dhejisyo dhejis ah, iyo maaddooyinka daboolka ah ayaa lagu dhejiyaa derbiyada dhammaadka leh geesaha geeska. In lagu koriyo "Farmaajo" khudradda waa la kobcin karaa sanadka oo dhan.
Akhri sidoo kale naqshadaha kale ee aqalka dhirta lagu koriyo: sida ku xusan Mitlayder, Giraan, laga bilaabo xoojinta, nooca tunnel iyo isticmaalka jiilaalka.
Sida loo bilaabo dhismaha?
Xulashada iyo qorista mashruuca.
Si aad ugu hesho maalgelintaada ugu badan, waxaad u baahan tahay inaad sax noqoto. hagaajinta dhismaha.
MUHIIM: Tilmaamaha ugu wanaagsan ee dhismaha dheeriga ah ee aqalka dhirta lagu koriyo ee meelaha ku yaalla koofurta woqooyiga 60° - laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfureed. Gobollada waqooyi ee dalka, waxaa lagu talinayaa in lagu baro dhismayaasha aqalka dhirta laga sameeyo galbeedka ilaa bari.
Dhismaha warshadaha warshadaha ayaa bilaabmaa xulashada goobta. Waa inay ahaato mid aad u badan xataa (xayndaab yar oo ah 0.04% waa la ogol yahay). Haddii dabaylaha duufaantu ay ka dhacaan gobolka, kabaha dheeraadka ah iyo dayrarka waa in la dhisaa si loo yareeyo xawaaraha dabaysha. Waxay ka ilaalin doonaan dhismaha barafka casriga ah.
Inta lagu jiro dhalidda barafka iyo roobabka culus, goobta waa inaysan ku ururin biyaha, taasoo kululaysa aqalka dhirta lagu koriyo oo aasaaskii aasaaskii. Ka hor inta aan dhismaha warshadaha warshadaha lagu farsameynayo waa inay ka fekeraan bixinta biyaha. Ciidku waa inuu ahaadaa bacrin ahIntaa waxaa dheer, si aad u hesho wax-soosaarka wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la qiyaaso isticmaalka qalabka ciidda, Bacriminta dabiiciga ah iyo dabiiciga ah.
Xulashada iyo qorista
Ka hor inta aan la dhisin aqalka dhirta lagu koriyo, beerta iyo milkiilaha beeraha gaarka ah waxay u baahan yihiin inay go'aan ka gaaraan waxa uu ku kici doono xagaaga iyo xilliga jiilaalka. Natiijo ahaan, waxaa la diyaarin doonaa sawir-dhirta beerahaiyo sidoo kale liiska shuruudaha.
Waayo-aragnimadu waxay muujisay in dhismaha qaab dhismeed mas'uul ah, kaas oo u adeegi doona sanado, waxa fiican in la isku halleeyo khabiiro. Shirkadaha gaarka ah, macaamiisha waxaa la siiyaa doorasho daraasado ah mashaariic diyaar ah kuwaas oo u dhigma rabitaankooda. Halkan waxaad ka iibsan kartaa aqalka dhirta lagu diyaariyo oo aan la rakibin oo ku dhejin saldhigga. Sida caadiga ah, ganacsatadu waxay bixiyaan adeegyo rakibo.
Mashruucyada iyo sawirrada warshadaha warshadaha:
Sida loo dhiso aqalka dhirta warshadaha? Si ay u koraan si ay u adeegaan sanado badan, waa in lagu rakibay on aasaaska. Aasaasku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ammaan ah u xirtid dhismaha, wuxuu ka hortagaa in biyuhu atmospheric ka baxsan, ka ilaaliyo aagga lagu beeray ka caws.
Nooc kasta oo lagu koriyo warshadaha yaryar waa mid ku habboon. aasaaska - on stilts, block, dhibic, slab, lebbiska. Wixii koriyo ah, waxay badanaa sameeyaan aasaaska la taaban karo, marar badan isticmaalka alwaax.
Wershadaha beeraha iyo warshadaha ayaa isticmaala qaab jir ah foomka dusha sare leh ama gable. Qaab-dhismeedka waxaa laga soo qaataa qaan-sheegaha, laga soocayo tuubada qoryaha ama geeska.
Qaab dhismeedku waa mid deg deg ah oo sahlan, laakiin qaabkani waa mid fudud ma istaagi karo miis culus oo culus. Haddii aad go'aansato inaad dhirta beeraha ka dhisto tuubbo qaansiir leh, ka dibna qaab-dhismeedka waa la wiiqi karaa. Tuubadu waxay leedahay qayb wareegsan ama wareegsan. Naqshadani sidoo kale ma hor istaagi miisaan badan oo baraf ah.
Sida ugu fiican waa qaabka xagga geeska (sawirka geeska). Waxaa lagu uruuriyaa dharka, iyada oo aan alxanka la isticmaalin, sawirka ayaa la galvanikaraa waxayna u adeegi kartaa sanado badan. Naqshadani waxay adkeyn kartaa culeyska barafka. ilaa 100 kg halkii mitir labajibbaaran.
Xuddunta ayaa saldhig u ah aasaaska. Wixii xoog leh, isticmaal xargaha qalabka isdabajooga ama xirmooyinka horay loo dhigay. Buirtani waxay bixin doontaa ku filan qallafsanaanta iyo xooghalka farqiga u dhaxeeya awooda kuleylka dhismaha aan wax ka qaban doonin qaabka dabacsanaanta ee dhismaha kulaylka iyo barafka.
Jirka ayaa noqon kara aluminium. Laakiin dhismaha aluminiumku wuu socon doonaa si aad u yeelato iyada oo hoos imanaysa dabaysha iyo baraf xoog leh.
Qalabka warshadaynta jiilaalka - mashruuc:
Sida maaddo daboolan ayaa loo isticmaalaa:
filim caag ah.
Polycarbonate Cell Cell
Waqtigaan, mawduuca ugu caansan ayaa ah polycarbonate cell. Waa sahlan tahay in la rakibo, waa mid lagu kalsoon yahay hawlgalka, ma burburin karo shilalka fiiqan. Qalabkani lama jebin doono xitaa roobab adag.
Warshadaha dibadda ayaa soo saara polycarbonate cell dhumuc kala duwan (laga bilaabo 3.2 ilaa 25 mm) iyo qaabdhismeedka. Guryaha xirfadlayaasha qaboobaha ee jiilaalka yaryar oo laga sameeyay polycarbonate, waxay isticmaalaan shey laga bilaabo 3.2 ilaa 6 mm qaro weyn. Polycarbonate isku dhafan ayaa badanaa loo isticmaalaa dhismayaasha aqalka dhirta lagu koriyo iyo kuwa lagu koriyo. Isu-dheelitirka iftiinka iftiinka wuxuu ku xiran yahay dhumucda xaashida oo kala duwan 62% ilaa 83%.
Isku dheelitirka iftiinka iftiinka ee dhalada88-92% loogu talagalay galaas oo ah dhumuc kala duwan). Goobaha aqalka dhirta waxaa lagu qurxin karaa labadaba daaqad iyo muraayad cagaaran, taas oo aad u xoog badan. Goobaha warshadaha Holland ayaa lagu daboolayaa muuqaal gaar ah. fadlan. Muraayadan ayaa lagu tuuray qaabka la dhammeeyey, taas oo kordhisa awoodeeda.
Film Iskuulada warshadaha waxaa loo isticmaalay wakhti dheer, laakiin walxadan waxay leedahay dhowr faa'iido daro. Filimku waa adag yahay in la hagaajiyo iyada oo aan waxyeello lahayn. Dabayshu way fidisaa filimka, waxay billaabmaysaa inay foorarsato oo ay jebiso, maxaa yeelay waxa loo baahan yahay in la beddelo. Filimada lagu beeray filimka filimka, oo ku yaalla aagga dabaylaha xooggan, waa in ay isku laabmaan sannadkiiba.
Beeraha filimada beeraha - sawir:
Waayo kuleylka Guryaha warshadaha ee xilliga qaboobaha waxay dhistaa shidaalka adag, korontada, kuleyliyaha gaaska iyo kululeeyaha saliidda leh. Waxay yihiin kululeey biyaha, kaas oo wareegaya tuubooyinka, oo lagu qabto hareeraha dhismaha, iyo dhulka hoostiisa, waxay daboolayaan radiators. Sidaas darteed, hawada iyo dhulka labadaba waa la kulaalaa.
Iskuulada warshadaha waxaa lagu dhalaalin karaa hawada diiran qalabka korontada. Qolka ayaa si dhaqso ah u heegan, laakiin marka qalabka la demiyo, heerkulka si deg deg ah ayuu u yareeyaa. Isla mar ahaantaana, dhulka uusan kululayn.
Wixii kulayliyo beeraha lagu beero waxaad isticmaali kartaa kululeeyaha casriga ah ee PLEN. Fadhiyeyaasha kululeeyaha ayaa lagu rakibay saqafka, inta lagu jiro shaqadooda, dhulka, dhirta iyo walxaha qaabdhismeedka ayaa kululaanaya, laakiin ma aha hawada.
Shucaaca infalawansada wuxuu u shaqeeyaa sida raajada qorraxda. Kuleylka dheeraadka ah wuxuu geli karaa hawada. Noocan ah kuleyliyo warshadaha warshadaha qaalilaakiin aad u waxtar leh, dhirta waxay dareemayaan weyn nalalka infrared iyo siinayaan dalagyo waaweyn.
MUHIIM: In lagu koriyo warshadaha leh kuleylka waa inay ahaadaan heerkulka isla heerarka qolka.
Guryo-warshadeed kuu ogolaato in aad ka hesho wax-soo-saarka weyn ee aag yar. Tayada iyo xajmiga alaabada la beero kuma xirna inta badan cimilada, taas oo tiknoolojiyada beeraha u samaysa beeraha lagu koriyo si caan ah.